Ma jiro wax hoos u dhigaya saameynta Amazon ee tafaariiqda iyo ganacsiga. Ma aha in la xuso burburka ka dhacay warshadaha tafaariiqda iyadoo ay ugu wacan tahay faafida iyo go'aanka xigay ee lagu xirayo inta badan dukaamada yaryar. Maanta, in ka badan boqolkiiba 60 macaamiisha ayaa bilaaba raadintooda internetka ee raadinta ee Amazon. Dakhliga Amazon ee ka soo gala iibiyayaasheeda suuqa wuxuu kordhay in kabadan 50 boqolkiiba sanadka 2020 marka loo eego sanadkii ka horeeyay. 2021 Ayaa Keeni Doona
Waxaa Amazon ku yaal 542 moos oo kala duwan oo ka laalaada… qiimahoodu waa $ 5.57 ilaa $ 384.23. Kuwa muusikada ka laalaada ee ugu jaban ayaa ah qabatooyin fudud oo aad ka soo hoos bixinayso golahaaga golaha. Kan mooska ugu qaalisan ayaa ah tan quruxda badan ee mooska la sudho oo gacanta lagu farsameeyo lagana sameeyo kheyraad waara oo waara. Dhab ahaan… Waan eegay iyaga. Waan tiriyay natiijooyinka, waxaan ku kala qiimeeyay qiimaha, ka dibna waxaan sameeyay baaritaanno tan ah oo ah muuska laalaado. Hadda,